Akwụkwọ ikike ngafe & Visa Maka ndị bịara Antigua na Barbuda
Maka ndị ọbịa Antigua na Barbuda ihe ndị a chọrọ ịbanye:
Ọtụtụ ụmụ amaala European Union (lee ndepụta dị n'okpuru) Achọghị visa iji banye Antigua na Barbuda na ezumike ma ọ bụ azụmaahịa. A na-ahapụ ndị bịara ileta ka ha nọrọ ogologo oge azụmaahịa ha, ọ bụrụhaala na:
a) Nke a abụghị ọnwa isii
b) ha nwere paspọtụ nke nwere opekata mpe ọnwa isii site n’ụbọchị ọpụpụ ha
c) ha nwere tiketi ije ma obu ndaghachi
d) ha nwere nkwenye maka ulo
e) ha gha eweputa ihe akaebe na ha nwere ikike ijigide onwe ha na Antigua na Barbuda
VISA / AKPUKWU ANYI EGO NA ANTIGUA NA BARBUDA
Enwere ike ibudata ngwa ngwa visa site na ịpị ebe a (PDF - 395Kb).
Oge mmeghe na Mọnde ruo Fraịdee 9.30:5.00 ka o ruo XNUMX nke ehihie. Ọhụhụ adịghị mkpa. Oge nhazi maka ngwa ndị visa dị ihe dị ka 5 ụbọchị ọrụ.
A ga-agwa ndị rịọrọ maka ụbọchị nnakọta ozugbo ngwa ha yana niile anatawo ma hazie akwụkwọ nkwado. Biko mara, igbu oge na nhazi nwere ike ime. Oge nhazi ihe ndị a hotara bụ ihe dị mkpụmkpụ ma ekwenyeghị na ọ ga-ekwe nkwa. Ọ gaghị ekwe omume iwepụ otu okwu nanị n'ihi na onye na-etinye akwụkwọ ekweghị ka oge zuru ezu maka ịhazi ya.
Ndi mmadu choro visa maka Antigua na Barbuda:
(Biko depụta n'okpuru ma ọ bụ gosi na High Commission)
Ntinye Visa na-akwụghị ụgwọ maka Diplomatik, Official na / ma ọ bụ ndị na-ejigide akwụkwọ ikike nke Antigua na Barbuda
Albania El Salvador Lesotho Saint Vincent na Grenadines
Armenia * Finland Luxembourg Seychelles*
Kambodia * Hong Kong Mozambique * Togo
China India Nicaragua toro toro
Costa Rica Isle nke Mmadụ Panama * United Arab Emirates**
Cuba Jamaica Philippines Uzbekistan (nke ọma 1st Jan., 2020)
Cyprus Jọdan Poland Vanuatu
Denmark Koria (Ugwu) Qatar Venezuela
Djbouti * Koria (Ndịda) Reunion Zambia
Egypt * Lebanon * Saint Lucia
Ala Ochie Britain
Akotiri na Dhekelia Cayman Islands Montserrat Isle nke Mmadụ
Ngalaba French na mkpokọta
Ala Ndịda France na Antarctic St Barth nke
Ókèala ndị ọzọ na-adabere na Europe:
Mba ndị ọzọ anaghị achọ visa maka ịbanye Antigua na Barbuda:
Korea Norway na ndị nkịtị South Korea
toro toro Uzbekistan
* Visa enyere ya mgbe ọ bịarutere ++ Visa enyere ya mgbe ọ bịarutere.
** Visa waiver maka Diplomatia na Official Passports
Citizensmụ amaala nke mba anaghị apụta na ndepụta ndị a dị n'elu chọrọ visa.
Biko mara na ụmụ amaala nke mba ndị a na -echekarị Commonwealth chọrọ visa maka ịbanye Antigua na Barbuda:
Bangladesh, Cameroon, Gambia, Ghana, India, Mozambique, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone na Sri Lanka.
Jiri ndị ọbịa na-aga njem ụgbọ mmiri onye ga-achọkarị visa agaghị enye ya ma ọ bụrụ na ha abịarute Antigua na Barbuda n'ụtụtụ wee pụọ n'otu mgbede ahụ.
'Ndị njem nọ n’ime ụgbọ elu ime njem n’otu ụbọchị ahụ, onye na-achọkarị visa, ịchọghị visa maka ịbanye Antigua na Barbuda, ma ọ bụrụhaala na ha nwere ihe akaebe banyere njem ha na -aga, ha ahapụghịkwa 'ebe a na-achịkwa' ọdụ ụgbọ elu.
Ederede chọrọ mgbe ị na-achọ visa:
Ụdị ngwa ngwa.
Paspọtụ na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ akwụkwọ njem njem enyere aka ma ọ bụ ikike nnabata ọ bụla maka obodo ọ bụla enwere ike ịgba ụgwọ gị, dị ka United Kingdom (biko rịba ama, Paspọtụ ga-adịrịrị opekata mpe ọ dị ọnwa 6 site na ụbọchị ibata na Antigua na Barbuda, ma gha inwe otu peeji zuru oke maka iwebata visa.)
Foto paspọtụ na-adịbeghị anya (45mm x 35mm).
Visa ego: Ntinye ntinye £ 30.00 Ọtụtụ ntinye £ 40.00
Nweta ego Achọrọ ma ọ bụrụ na etinyere ya na mmadụ iji zere igbu oge.
Nzipu ozi ka akwụkwụ ụgwọ nye Antigua na Barbuda Kọmitii Dị Elu (oburu na ezigara ya na United Kingdom).
Sterling International Money Order (ọ bụrụ na-eziga ngwa ọrụ si na mpụga United Kingdom) Ekwesịrị inye iwu ego na pound. Iwu ego n ’ụdị ego ọ bụla ọzọ ọ bụghị na-anabata.
ND CH ỌRERS NA-AH ARE AD NOTGH. ANYA
Ihe akaebe banyere njem ahụ Antigua na Barbuda pụtara ma ọ bụ nkwenye ụgwọ maka ndị njem gị. Otutu visa abanyela ka enyero ndi anamachọputa nke meputara ihe akaebe nke otutu ibanye Antigua na Barbuda.
Ihe akaebe banyere oge ọnụnọ gị ma ọ bụ leta nnabata nke ndị ọbịa gị. Maka ụmụ akwụkwọ, biko nye akwụkwọ ozi nnabata gị ụlọ akwụkwọ gị, yana nkọwapụta ebe ị ga-anọ tupu ịmalite ọmụmụ gị. Maka ndị njem na-azụ ahịa, biko nye gị akwụkwọ ozi sitere n'aka onye were gị n'ọrụ na-ekwupụta ebumnuche njem gị.
Jiri nwayọ tinye £ 7.00 maka nzipu ozi edebanyere edebanye n'ime Europe.
Ihe akaebe banyere ego iji kwado njem ahụ bu nkwupụta akụ maka ọnwa abụọ gara aga.
Enwere ike ịchọ ndekọ ndị uwe ojii ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-enye visa na-arịọ ya.
Biko kpọtụrụ Antigua na Barbuda High Commission maka ozi ndị ọzọ gbasara visa na ntinye chọrọ.